Nidaamka bey'aduhu wuxuu qaataa waqti dheer iyo ka dheer inuu soo kabsado abaarta ka dib | Saadaasha Shabakadda
Nidaamyada deegaanka waxay qaadataa waqti dheer iyo ka dheer inay soo kabato abaarta ka dib
Maaddaama celceliska heer kulka adduunka uu sare u kacayo kuleylka adduunka awgeed, abaaraha ayaa la filayaa inay noqdaan kuwa soo noqnoqda oo aad u daran gobollada badan ee meeraha. Waxaa jira daraasad cusub oo tilmaamaysa taas deegaanka deegaanka ee deegaanka waxay qaadataa waqti dheer si looga soo kabto abaarihii ugu dambeeyay intii ka jirtay qarnigii labaatanaad.
Kordhinta celceliska heerkulka meeraha ayaa u horseedi kara nidaamka deegaanka oo aan si buuxda u soo kaban. Tani waxay u horseedi doontaa geedaha geerida iyo, sidaas darteed, sii deynta badan ee gaasaska aqalka dhirta lagu koriyo.
1 Abaarta kadib
2 Xogta mustaqbalka
Kooxda Christopher Schwalm, oo ka socota Xarunta Cilmi baarista ee Woods Hole, oo ku taal Falmouth, Massachusetts, Mareykanka, iyo Josh Fisher oo ka socda NASA isla waddankaas, ayaa cabiray waqtiyada soo kabashada ka dib abaaro ka dhacay gobollada kala duwan ee adduunka. Si tan loo cabbiro, saadaasha moodooyinka cimilada iyo cabbiraadda dhulka ayaa la isticmaalay.
Gabagabada cilmi baarista ayaa ah waxay qaadataa waqti dheer iyo ka dheer ku dhowaad dhammaan aagagga dhulka inay soo kabtaan ka dib muddo abaar ah. Waxaa jira laba gobol oo si gaar ah ugu nugul dhacdadan. Tani waa aagagga kuleylaha iyo kuwa ku yaal waqooyiga sare. Labadan meelood waqtiga soo kabashada ka dib dhacdo abaar ayaa aad uga dheeraatay kuwa kale.
Hawada sare waxaad ka arki kartaa dhammaan keymaha meeraha iyo nidaamyada kale ee deegaanka ee ay abaaraha ku habsadeen qaab soo noqnoqday. Markay celceliska heer-kulka meerahu kor u kacdo, abaaraha ayaa noqnoqonaya oo sii xoogaysanaya.
Xogta lagu ururiyey meelaha bannaan waxay u oggolaaneysaa jilitaankaas cimilada hore iyo tan hadda jirta in la xaqiijiyo, taas oo iyana, ka caawinaysa yareynta hubin la'aanta saadaasha cimiladeed ee mustaqbalka.
Waqtiga ay ku qaadato nidaamka deegaanka si uu u soo kabsado waa halbeeg muhiim u ah awood u lahaanshaha qiimeynta suurtagalnimada badbaadada isla xaaladaha xaaladaha daran. Waxay kaloo kaa caawinaysaa inaad ogaato waxa jira marinka ay geedaha ka bilaabaan inay u dhintaan biyo la’aan.
Muddooyinka gaagaaban ee u dhexeeya abaaraha, oo ay weheliso waqtiyo soo-kabasho oo dheeri ah, waxay u horseedi karaan geedo baahsan oo dhinta, yaraynta awoodda aagagga dhulka ay dhibaatadu saameysey si ay u nuugaan kaarboonka Hawada.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Abaaraha » Nidaamyada deegaanka waxay qaadataa waqti dheer iyo ka dheer inay soo kabato abaarta ka dib
Qorshaha Bilyaneerka Shiinaha ee Nadiifinta Biyaheeda!